Col. C/Llahi Ayaa Qorsheynaya Inuu Isku Dhac Beelood Ka Dhex Abuuro Dayniile Iyo Koofurta Muqdisho
Buluugleey, February 4, 2006
Waxaa in badan la hadal hayey in waqooyiga Gaalkacyo laga soo abaabulo dagaalada ka dhex dhacay dadka walaalahaa ee wada degan koofurta Mudug. Col. C/llahi ayaa ku guuleystey inuu iska sii mashquuliyo dadka degan gobolada dhexe si uu fursad ugu helo dagaalka uu ku hayo beelaha degan Muqdisho.
Shariif Xasan oo gacantiisa midig ka dhigtay mudane Qanyare ayaa suurto geliyey in heshiiskii Cadan ku dhexmaray Shariifka iyo C/llahi dartiis uu Qanyare kula saaxiibo Col. C/llahi Yusuf isaga oo ka soo jeeda dhinaca Shariifka. Qanyare iyo Shariifka ayaa qaba fikrada ah in maskax lagu kala daneysto intii la adeegsan lahaa cudud ciidan oo ka soo horjeeda C/llahi. Ujeedada Shariifka ayaa ku qotonta in Qanyare uu xaga dhaqaalaha kala maamulo si qeybta uga soo aada deeqaha uu la maareeyo, una sii jirto kalsoonida iyo taageerada looga hayo dhinaca Muqdisho. Sidoo kale Shariifka ayaa raba inuu Qanyare isaga fujiyo culeyska ay ku hayaan Prof. Geeddi, Maxamed Dheere iyo Jurille, kuwaas oo kula tartamaya Shariifka maamulida dhaqaalaha loogu tala galay in lagu furdaamiyo khilaafka dowlada iyo baarlamaanka u dhexeeya oo gogoshiisa laga fidiyey baydhabo, magaaladaas oo fursad u siinaysa Shariifka in siduu rabo uu u maamusho hantidaas, taas oo noqoneysa fursadii kowaad oo soo marta Shariifka.
Col. C/llahi ayaa soo dhaweeyey siyaasada Shariifka, kana soo horjeeda kooxda Jowhar hadda isku baheysatay, waxaa Col. C//lahi u muuqday baahi weyn oo uu u qabo Qanyare oo miisaan culus ku leh magaalada Muqdisho. Col. C/lahi ayaa aaminsan in beesha degta koofurta Muqdisho aysan dooneyn madaxtinimadiisa, siyaasiyiintooduna ay ka shaqeynayaan iney furfuran hadba xiriirka uu soo xirto, sidaasna uu ku doonayo beelaha la degan mid ka mida oo ka mashquulisa. Col. C/llahi ayaa horay ugu hamiyey cid la dagaasha beeshaas, wuxuuna marar badan isku deyey inuu Maxamed Dheere ka hor keeno beeshaas iyo siyaasiyiintoodaba, taas oo aan ka suurtogelin dhinaca Maxamed Dheere iyo weliba isagoo bedelka arrintaas la galay Indhacade heshiis nabadeed. Heshiiska Col. C/llahi uu la galay Qanyare ayaa ugu muuqata hadda fursad dhaba oo uu ugu helayo inuu degaanka Dayniile dagaal la geliyo koofurta Muqdisho.
Mudane Qanyare oo dhaqaale iyo awood dheeraada doonaya ayey ka suurtowdaa inuu Col. C/llahi ka ogolaado hindisahaas, waa haddii isna loo yeelo sida uu rabo oo ah in la siiyo wasiirka kowaad. Qanyare oo ah hogaamiyaha keliya ee ka jira beeshiisa ayaa ah dagaalooge u dhaqan dhow Col. C/llahi, welina uga sii xagjira dhaqaale lahaanshaha kelinimo. Qanyare ayaa aaminsan in beelaha waqooyiga iyo koofurta Muqdisho waxa keliya ee uu tixgelin uga heli karo iney tahay isaga oo ka soo jeesta isbaheysiga cusub oo iyaga danahooda ka soo horjeeda oo ay wada hogaaminayaan Col. C/llahi iyo Shariifka. Danta Qanyare ayaan fulin markii ay run u timaado in beelwadaagta Muqdisho ay awooda qeybsato. Marka siyaasadu ay halkaas ka marto, caado ahaan waxa keliya ee uu Qanyare miisaankiisa ku muujo waa inuu xaalad dagaal Muqdisho ka abuuro sida horay u soo dhacday xiliyadii Cali Mahdi iyo Caydiid. Col. C/llahi oo aan hadda moogeyn niyadjabka uu ku sugan yahay Qanyare ayaa daneynaya in saaxiibtinimada Qanyare ay ka dejiso culeyska ka saran koofurta Muqdisho, gaar ahaan hantida Bakaaraha oo ka maaliyad badan tan beeshiisa iyo dowladiisa oo wadajirta. Qanyare ayaa waxaa looga bartay in qaskiisu uu saameeyo jidgooyada uu dhigo jidadka soo gala suuqa Bakaaraha, kaas oo saameeya dhaca gaadiidka iyo xayiraada ganacsiga Bakaaraha. Qanyare ayaan hadda u jeedin dagaalka Maxamed Dheere iyo Geeddi waayo wuxuu u arkaa xidigo sii dhacaya oo aan wax cuulaba ku lahayn shaxda siyaasadeed ee hadda socota, cidda keliya ee Qanyare uu u arko inuu wax ku noqon karo dagaalkooda waa beesha degen koofurta Muqdisho, waayo korneylkuna waa daneynayaa dagaalkooda, Qanyarana waxey ugu muuqataa cod iyo awood looga tixgeliyo Muqdisho inuu ka helayo dagaalkaas.